Hay'adda African Educatinal Trust Oo Deeq Waxbarasho Siisay 45 Gabdhood Oo Kamida Ardayda 3 Dugsi Sare Oo Kuyaala Caasimadda Hargeysa + Sawiro | Dhamays Media Group
Hay’adda African Educatinal Trust Oo Deeq Waxbarasho Siisay 45 Gabdhood Oo Kamida Ardayda 3 Dugsi Sare Oo Kuyaala Caasimadda Hargeysa + Sawiro
Hargeysa (Dhamays)- Deeq waxbarasho ah oo ay soo bixiyeen Ururka Caalamiga ah ee Zebra Trust ayaa la gudoonsiiyey 45 gabdhood oo ka kala socday seddex dugsi sare oo ku yaala caasimadda hargaysa, ururka deeqdan soo bixiyey ayaa soo mariyey Hay’adda AET oo mashaariicda waxbarashadda kala shaqyasa wasaaradda waxbarashadda iyo tacliinta sare.
Munaasibadaa oo si heer sare ah loo soo agaasimey ayaa waxa soo wada qaban-qaabiyey waaxdda Lamaanaha ee Wasaaradda waxbarashadda iyo tacliinta sare iyo Hay’adda AET, waxaanay ku qabsoontay xafladaasi Hoolka shirarka ee wasaaradda waxbarashadda. Ardaydan deeqda la gudoonsiiyey ayaa ka kala socday dugsiyadda kala ah Dayib Gurey, Faarax Oomaar iyo dugsiga Sare ee 26 Juun.
Waxa munaasibadan ka soo qayb-galay Wasiir Kuxigeenka Wasaaradda Waxbarashada iyo tacliinta Sare Mudane Axmed Xuseen Rooble, Agaasimaha Guud ee wasaaraddasi, Gudoomiyaha Waxbarashadda Galbeedka Maroodi Jeex Xuseen Ibraahim Xasan, Maamulayaasha Seddexdan Dugsi iyo Madaxda Hay’adda AET, waalidiin iyo ardayda deeqdan la gudoonsiinayey.
Waxa ugu horeyn munaasibadaasi ka hadlay Maamulaha dugsiga sare ee 26 Juun mudane Cali waxaanu mahad balaadhan u soo jeediyey ururka deeqdan soo bixiyey, Hay’adda AET iyo waaxda Lamaanaha Wasaaradda waxbarashadda oo si wada jir ah uga wada shaqeeya mashruucan loogu deeqay ardaydan, waxaanu ku tilmaamay mid faa’iido badan keenay sababta oo ah hablaba oo wax la baro waa sidii oo qoys dhan wax la baray. Hooyaddu marka ay aqoonta leedahay ilmaha ay dhashana way ka caawin kartaa duruusta dugsiga loogu soo dhigo laakiin haddii aan iyada wax la soo bari ilmeheeduna waxa uu halis ugu jiraa jahli iyo dib u dhac aqooneed, sidaa darteed waxa uu u soo jeediyey waalidiinta in ay hablaha waxbarashadda kula dedaalaan.
Gudoomiyaha waxbarashadda gobolka maroodi jeex qaybtiisa galbeedka mudane Xuseen Ibraahim Xasan ayaa isaguna munaasibadaasi hadalo dardaaran iyo guubaabo ah ka soo jeediyey waxana hadaladiisii ka mid ahaa; runtii waxa ii farxad ah in aan goob-joog ka ahaado xafladan quruxda badan ee loo qabtay 45 hablood oo ka kala socda seddexda dugsi ee aan soo sheegnay. Hablaha waxan u soo jeedin lahaa in ay dedaalaan oo ay kaalmo fiican ka keenaan imtixaanadda shahaadiga ah ee laga qaadi doono. Sidoo kale waxan waalidiinta u soo jeedinayaa in hablaha ay wax baraan sida ay inamada wax u baraan oo kale.
Madaxa mashaariida hay’adda AET Mudane Axmed ayaa isaguna ka warbixiyey mashruucan lagu caawinayo qaar ka mid ah hablaha dhigta dugsiyadda sare ee dalka waxaanu hadalkiisa ku bilaabay; mashruucani waxa uu soo socday mudo seddex sano ah waxana mashruucan Somaliland ugu deeqay ururka caalamiga ah ee ZEBRA Trust, kaasi oo soo mariya hay’adda AET si ay u maasmusho isla markaana u soo xusho gabdhaha xaqa u leh deeqdan. Waxan mashruucan kala shaqaynaa waaxda lamaanaha ee wasaaradda waxbarashadda iyo taciinta sare, runtii waxan odhan karaa mudadii uu socday mashruucani wax la taaban karo ayaa ka muuqda aqoontii gabdhihii ku guulaystay deeqdan.
Haddii aan warbixin ka bixiyo habka iyo hanaanka aan u soo xulano hablaha la siinayo deeqdan waxa shuruud u ah in horta qoyska ay ka soo jeedaan aanay awoodayn dhaqaalihii ay gabadha yar kaga bixin lahaayeen dugsiga, sidoo kale waxa iyaduna shuruud kale ah in ay waxbarashadda ku wanaagsan tahay gabadhaa yari. Maanta waxan halkan ku gudoonsiin doonaa maamulayaasha dugsiyadda ay ka kala yimaadeen ardaydani hal sano lacagteed kaasi oo ah kan aynu ku jirno ee 2017-ka. Lacagaha aan ku bixino mashruucan waxa ay u qaybsan yihiin $81 doolar oo aanu ugu talagalnay lacagta waxbarashadda (Fee) iyo 19 doolar oo aan ugu talagalnay in ardayaddu siisato buugaagta ay wax ku baranayso, guud ahaan lacagtu waxay dhan tahay $100 doollar.
Waxa iyaduna munaasibadaasi ka hadashay Agaasimaha waaxda lamaanaha ee wasaaradda waxbarashadda iyo tacliinta sare Marwo Ayaan Xaaji Yuusuf, waxaanay ku dheeraatay muhiimadda ay bulshadda u leedahay gabdhaha oo wax la baro, iyada oo ka hadlaysa arrimahaasina waxay ku bilawday sidan; xafiiska lamaanaha ee wasaaradda waxbarashadda waxa u farxad ah in uu ka shaqeeyo mashaariicda noocan oo kale ah kuwaasi oo lagu tayeynayo isla markaana kor loogu qaadayo aqoonta hablaha dugsiyadda sare ee dalkeena. Waxan mahad balaadhan u soo jeedinayaa hay’adda AET oo fikiradda wax qabad ee aanu ula tagno runtii naga aqbasha waxanan odhan karaa waa saaxiib weyn oo ay wasaaradda waxbarashaddu leedahay.
Sidaa la soo sheegay mashruucani waxa uu soo socday laba sano oo hore iyo sanadkan hadda bilaabmay kaasi oo ka dhigaya in mudo seddex sano ah uu socon doono mashruucani, haddii dhaqaale kale loo helana wuu sii socon doonaa. Hablaha waxan kula dardaarmayaa in ay aqoontooda xoojiyaan isla markaana ay kaalmaha hore galaan, hablaha qaarkood waxan arkayey iyaga oo dhibco hoose keenay taasina looma baahna, waa in aad u dedaashaan sida la idiinku hagar baxay.
Mudane Xasan Axmed Cige (Embassy) oo ah madaxa hay’adda AET ayaa isaguna munaasibadaasi ka soo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysey taasi oo ku wajahnayd xafladan, waxaanu ku bilaabay; ardayda waxan kula dardaarmayaa in ay yeeshaan ama ay sii doortaan cida ay u eegaanayaan ama ay ku dayanayaan iyaga oo ka eegaya xaga wanaaga qofkaasi leeyahay iyo kaalinta uu bulshadeena kaga jiro. Waxanaanu halkaa ka tiriyey maanso uu dhawaan curiyey taasi oo ka hadlaysa cida aad ku dayan lahayd (Road Model) mustaqbalka. Sidoo kale mudane xasan ardayda waxa uu kula dardaarmay in ay dedaal muujiyaan si ay dhibco wanaagsan u keenaan imtixaanadda soo socda.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashadda Iyo Tacliinta Sare Mudane Cabdi Cali Jaamac Ayaa isaguna munaasibadaasi ka soo jeediyey khudbad kooban oo uu kaga hadlay ujeedada munaasibadani ay xambaarsanayd waxaanu hadalkiisa ku bilaabay; ujeedada gabdhahan loo taageerayo waxbarashadoodu waa sidii kor loogu qaadi lahaa dhammaan heerka aqooneed ee qaranka Somaliland, sababta oo ah gabadha marka wax la baro waxay soo saari doontaa mustaqbalka caruur heerkooda aqooneed dhisan yahay, sidaa darteed waa sidii qaran wax la baray. Barnaamujyadda lagu dhiirigalinayo waxbarashadda hablaha wasaaraddu way sii wadi doontaa insha allah.
Ugu danbayn waxa munaasibadaasi soo afmeeray Wasiir kuxigeenka wasaaradda waxbarashadda Mudane Axmed Xuseen Rooble waxaanu xusay muhiimadda balaadhan ee ay bulshadda u leedahay gabdhaha oo wax la baro, waxaanu waalidiinta kula dardaarmay in ay hablaha waxbarashadda la ogaadaan. Sidoo kale wasiirku waxa uu munaasibadaasi ka soo jeediyey hadalo hogo-tusaalayn ah kuwaasi oo tilmaamaya sida ay u kala duwan yihiin hooyadda wax baratay iyo hooyadda aan waxba la soo barin, waxaanu ku bilaabay; waxa jiray hooyo aan yaraanteedii waxba la soo barin, dabadeed seddex wiil oo ay dhashay ayaa waxbarashaddii dugsiga galay, maalin maalmaha ka mid ah ayey inamadii oo imtixaankii dugsiga loo soo sheegay weydiisay; “hooyo halkeed kala gasheen natiijadii imtixaanka?” mid ka mid ah wiilashii ayaa yidhi hooyo anigu kaalinta 23-aad baan galay, kii kalena wuxu yidhi kaalinta 10-aad baan galay, kii ugu danbeeyey baa yidhi hooyo anigu waxan galay kaalinta kowaad (1), markaasay hooyadaasi intay naxday ku tidhi allaa hooyo habaar kugu dhac miyaan idhaahdaa’ maxaad kaalinta 23-aad u geli weyday.Taasi waxay ku tusaysaa sida ay hooyadda wax baratay iyo ta aan wax la barin u kala duwan yihiin, waxan idinkula dardaarmayaa in aad waxbarashadda halkaa ka sii wadaan oo aydaan ka caajisin.
Previous: Dhalinyaro La Magac Baxday Maalin Qad Oo Quudi Walaalkaa Oo Deeq Ku Wareejisay Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland + Video
Next: Suldaanka Guud Ee Beelaha Somaliland Maxamed Suldaan Cabdiqaadir Oo Soo Jeediyey In La Kala Diro Golaha Guurtida